Booqashada Jacob Zuma oo bog cusub u furtay xiriirka Kenya iyo Koonfur Africa – The Voice of Northeastern Kenya
Booqashada Jacob Zuma oo bog cusub u furtay xiriirka Kenya iyo Koonfur Africa
Star FM October 12, 2016
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa maanta sheegay in booqashada taariikhiga ah ee uu dalka ku yimid madaxweynaha wadanka Koonfur Africa Jacob Zuma ay tahay mid waji cusub u billowday xiriirka diplomaasiyadeed ee ay leeyihiin wadamada Kenya iyo Koonfur Africa.
Kenyatta oo muujiyay sida uu ugu riyaaqsanyahay safarka Zuma ayaa hoosta ka xariiqay in bog hor leh oo dhinaca horumarka ah uu guda galay dadaalka ku aadan xoojinta cilaaqaadka labada dowladood.
Madaxweyne Uhuru ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in xiriirka Kenya iyo Koonfur Africa oo sii hagaaga ay dan weyn ugu jirto guud ahaan dalalka kale ee qaaradda Africa, maadaama ay horay labadaan wadan door muhiim ah ka ciyaarayeen wanaajinta mustaqbalka qaaradda.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray in hogaamiyeyaasha dhamaan wadamada Africa looga baahanyahay in ay ka shaqeeyaan xoojinta xiriirka dowladohooda, si horumar baaxad leh oo wada jir ah loogu tallaabsado.
Hadalkaan ayuu madaxweynaha sheegay xili uu xalay aqalka madaxtooyada gudihiisa casho sharaf ku marti galiyay madaxweynaha Koonfur Africa Jacob Zuma iyo xaaskiisa Sizakele Zuma oo booqasho rasmi ah ku jooga Kenya.
Zuma iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa Nairobi soo gaaray maalintii Isniinta ahayd ee isbuucaan, waxaana uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee ka socda Koonfur Africa oo soo booqda Kenya.
← Qof falastiini ah oo lagu dilay magaalada Qudus
Xildhibaanka Nyando oo damiin lagu sii daayay →